महिलाको मुखबाट चार फिट लामो स’र्प निकालियो, सु’तेको बेलामा शरिरमा पसेको थियो ! त्यस, पछि, यस्तो, भयो – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/महिलाको मुखबाट चार फिट लामो स’र्प निकालियो, सु’तेको बेलामा शरिरमा पसेको थियो ! त्यस, पछि, यस्तो, भयो
काठमाडौ । एकजना महिलाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आयो । उनी घरवाहिर सु’तेको बेलामा अचानक समस्या देखियो । उनलाई अस्पताल लिएर गएपछि उनको घाँटीमा केही बस्तु भएको पत्ता लाग्यो । तर चिकित्सकले त्यो बस्तु वाहिर निकालेपछि डराएर भा’गे । त्यो बस्तु चार फिट लामो स’र्प थियो । यो घटना रसियाको हो । चिकित्सकहरुले चार फिट लामो स’र्प महिलाको मुखवाट निकालेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा सार्वजनिक भएको सो भिडियो अहिले विश्वव्यापी भएको छ । डेली मेलले रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै महिला लेभासी गाउँमा रहेको दागेस्तेनस्थित आफ्नो घरको आँगनमा सु’ति’रहेका सो घटना भएको थियो । उनको शरिरमा त्यो स’र्प कसरी प्रवेश गरेको थियो भन्ने कुरा खुलेको छैन । भिडियोका आधारमा मात्र धेरै अनुमान गरिएका छन् ।
महिलाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या भएपनि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो जहाँ उनलाई जनरल एनेस्थेटिकमा राखिएको थियो । भिडियोमा पञ्जा लगाएका पुरुष डाक्टरले ती महिलाको घाँटीमा ट्युब छिराएर केही बस्तु निकाल्छन् । बाहिर निकालेपछि त्यो बस्तु स’र्प भएको थाहा हुन्छ । भिडियोमा एकजना डाक्टरले ‘हेरौं, यो के रहेछ’ भनेको सुन्न सकिन्छ ।
महिलाको मुखबाट स’र्प निस्कने बित्तिकै महिला स्वास्थ्यकर्मी भने डराएका छन् । उनी आ’त्तिदै पछाडि सर्छिन् र महिलाको मुखबाट निकालिएको वस्तु स’र्प भएको थाहा पाएपछि उनी कराउँछिन् । त्यसपछि उक्त स’र्पलाई मेडिकल बकेटमा फ्याँ’किन्छ । स’र्प जिउँदो थियो वा त्यो महिलाको शरीरभित्र कति समयसम्म रह्यो भन्नेबारे जानकारी उपलब्ध छैन ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******